Ukuhlukaniswa kwe-Ultrasonic kwe-Animal Manures ngaphambi kokugaya i-Anaerobic - Hielscher Ultrasound Technology
Ukungena kwe-Ultrasonic kwandisa imethane (CH4) isivuno, kunciphisa isikhathi sokugcina esiqinile (SRT) futhi sithuthukise ukusebenza jikelele kokugaya okuncane kwe-anaerobic. Lokhu kungumphumela wokuhlukaniswa kwama-biosolids namaseli e-bacterial emanzini wezilwane kanye nokukhululwa kwezingxenye ze-intracellular ngenxa yokuxazululwa kwe-particulate matter. Ama-reactors ama-Hielscher ultrasonic ekudleni kokutholakala kwezilwane zasolwandle aholela emethane eningi (i-biogas) kanye nesidingo esiningi se-chemical oxygen-demand (SCOD) ekugayeni kwe-anaerobic.
Ukugaya kwe-Anaerobic ye-Animal Manures
Izidakamizwa zezilwane zigajwe ngokulinganayo ukuze kuncishiswe okuqukethwe kohlobo lwezinto eziphilayo, ukunciphisa iphunga nokunciphisa ukukhishwa kwegesi lokushisa okuvela emigodini ehlanganisiwe. Enye inzuzo engaba khona ukunciphisa ama-pathogenens. Imfucumfucu yesilwane yokugaya ingulube yezingulube (umquba wezingulube, umquba womquba), umquba wezimbuzi noma umquba wezinyosi we-beef, umquba wezinkukhu, umquba we-turkey, umgodi we-pit, umquba wamanzi, i-feedlot umquba kanye nomfucumfucu womquba.
I-cavitation ye-ultrasonic ihlukanisa ama-solid solids futhi yandisa ubuningi be-substrate engokwemvelo ehlakaziwe kanye nenani lokulimala kanye nokugaya ama-biosolids ngesikhathi senqubo yokugaya i-anaerobic. Lokhu kufakwa kwangaphambili kwenza kube khona indawo engaphezulu yokutholakala kwe-anaerobic. Umphumela uba ukuguqulwa okuthuthukisiwe kwezinhlayiya ze-biosolid ku-biogas. Lokhu kukhulisa i-biodegradability, kwandisa isivuno se-biogas futhi kwandisa isidingo se-chemical soluble oxygen (SCOD).
I-Hielscher inikeza ama-disintegrator ama-ultrasonic ngokulandelwa kwe-in-line kwe-volume encane neyindleko enkulu. Zonke izinsimbi ze-ultrasonic zenzelwe ukugijima ngokuqhubekayo (24hrs / 7d / 365d) ukuze kusetshenziswe ukusetshenziswa kwemishini esiphezulu. Ngokuya ngezici, ezifana nokwakhiwa kwemfucuza, i-TS noma isikhathi esiqinile sokugcinwa kwe-digester, umthamo wezinto ezidingekayo uhluka phakathi kuka-2 no-10 kW nge-1 m3/ ihora lokufaka okuningi. I-Hielscher probs ultrasonic kanye ne-reactor geometries zenziwe kahle ngokusekelwe eminyakeni eminingi yokuhlangenwe nakho okuwusizo ekuqothulweni kwemfucumfucu kanye ne-sludge ngaphambi kokugaya. Lokhu kubalulekile, njengoba ukulungiswa kwemingcele ye-sonication kanye nomklamo we-hydraulic kunomthelela omkhulu ekuthintekeni komonakalo. Ama-reactors ama-Hielscher ultrasonic avumela ukusetshenziselwa izinto ezibonakalayo ezihlanjululwe kakhulu (okuhlanjululwe kancane) ngenqubo ephakeme yokusebenza. Futhi amadivaysi ama-ultrasonic aseHielscher afaka ukusebenza kahle kagesi okungaphezu kuka-81% – okuholela ekusebenzeni okuphezulu kokusabalalisa. Ukusetshenziswa kwe-macerator ngaphambi kokuba i-sonication iyanciphisa izinhlayiya ezincane namafayili futhi kuthuthukise ukulingana kokufakelwa ohlelweni lwe-ultrasonic.
48kW Ultrasonic Processors
I-Inline Ultrasonic Disintegrator
Ukuhlanganiswa kwe-Co-Digestion ye-Waste Mixtures
Izinzuzo zokuhlakazeka kwe-ultrasonic ngaphambi kokugaya kungenelela ngaphezu komquba wezilwane. I-ultrasonication ithuthukisa i-hydrolysis ye-co-digestion yomquba ngokudaka kokudla, umsele wamanzi omasipala noma ngisho ne-glycerin engcolile evela ekukhiqizeni kwe-biodiesel. Ukuqothulwa kwe-Ultrasonic njengokwenziwe kwangaphambi kokungenwa kwe-mesophilic noma i-thermophilic co-digestion kubonisa isivuno esikhulu kakhulu se-volumetric methane, ephansi H2S (iphunga) kanye ne-effluent ammonia ephansi kunezinto ezingezona ezenziwe nge-albhamu. Inani elincane le-glycerin (4 kuya ku-6%) elongezwe kumquba ngaphambi kokuba i-ultrasonic disintegration ibangele ukwanda okukhulu kwezokukhiqiza kwe-biogas.
Umphumela ocacile wokuhlakazeka kwe-ultrasonic ukwanda kwe-biogas isivuno. Kodwa-ke, ngisho nokulondoloza okukhulu kunomphumela wezindleko ezincane zamaloli kanye nezindleko eziphansi zokuchitha amanzi ngenxa yokunciphisa imfucuza emva kokugaya impahla. Izikhathi zokugcina ezincane zithuthukisa amandla okugaya futhi zingasiza ukugwema ukufakwa kwe-digester eyengeziwe. Iphunga elingaphansi ngenxa ye-H ephansi2I-s kanye ne-effluent ammonia encane kunezingqinamba zemvelo.
Ukufakwa nokubuyiswa kabusha
Ama-reactors ama-Hielscher ultrasonic angahlanganiswa kalula kumaphrojekthi amasha noma aphinde aphinde aphinde afakwe kumanyolo we-anaerobic ekhona. Ungahlola imiphumela yempahla yakho yokudoba ngesilinganiso esincane, isib. Ukusebenzisa a UIP2000 (20kHz, 2000 watts) uhlelo nge-cascatrode probe nokugeleza kwesisetshenziswa segesi. Umklamo we-modular wezinhlelo eziphezulu zamandla ultrasonic (isib. 10x I-UIP4000, ama-kilowatts angu-40) ivumela ukufakwa okuguquguqukayo nokuthuthukiswa kancane kancane. Ikakhulukazi uma uphinde uhlaziya ama-digesters aselekhona, izindleko zokusebenza kwe-sonication zisungulwe ngokushesha ngokulondolozwa kwezindleko kanye nokuthola imali ye-biogas. Sicela uxhumane nathi ngolwazi lwamahhala!
I-Biogas – Amandla avuselelekayo
I-Biogas iyimvelo enobungane, evuselelwe amandla. Ngesikhathi Biodiesel futhi I-Bioethanol zivame ukukhiqizwa kokudla noma izitshalo ezingezona ukudla, i-biogas evela kumquba isebenzisa umkhiqizo wokulima. I-biogas ayidingi isidlo sokuphuza amandla esiphuthumayo samandla noma amakhemikhali acasulayo futhi ine-carbon encane kakhulu. Ukuxubha nge-ultrasonically ku-anaerobic kuveza amandla ahlanzekile, aluhlaza futhi avuselelwe emisebenzini eminingi yemfuyo ngenani lokuncintisana namanani angaphansi kwegesi yemvelo.